Jawaar Mahaammad: 'Kaayyoon 'Master Plan' jalqabaas quubsuma uummataa jijjiiranii naannicha alagoomsuudha' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, MAHEDER HAILESELASSIE TADESE
Rogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammad dhimma Finfinnee irratti
Obbo Jawaar Mahaammad yeroo Maaster Pilaanii Qindaa'aa Finfinnee hojiirra ooluuf yaalame keessa mormii ture keessatti tarkaanficha mormuun nama qooda guddaa qabu ture.
Akkaataa Maaster Pilaanichaatti magaalaa Finfinnee babal'isuuf jecha seeraan ala magaalicha irraa fageessuun manneen jireenya ijaaramaa turan jedha.
Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa waan taateef, babal'inni ishee akkamitti seeraan ala jechuu dandeenya kan jedhu ilaalchisee Jawaar waan jedhu, ''Dhimmichi waldhabdee naannolee lamaanii osoo hin taane, magaalan kamiyyuu daangaa mataasaa qabaachuu waan qabuuf,'' jedha.
Magaalotumti Oromiyaa keessa jiran kamiyyuu daangaa qabu jedhee, fakkeenyaaf magaalaan Adaamaa Walancitii deemee mana ijaaree qooduu hin danda'u jedha.
''Maasaanuu daangaa qabdi.
''Quubsuma uummataa jijjiiranii naannicha alagoomsuun, booda adeemsa keessa immoo Finfinnee naannoo biraatiin waliiti qabanii Oromiyaa bakka lamatti muruun; karoora master pilaaniidhaan lafa kaawwame sana hojiitti hiikuuf kan yaadamedha,'' jedha xiinxalaan siyaasaa kun.
''Mirgi abbaa biyyummaa bilisummaa dhugaa qofaan kabajama'' ABO
Aanga'oonni naannoo Oromiyaa tokko tokko Finfinneen iyyuu kan keenya daangaa nu hin barbaachisu ejjennoo jedhu akka qaban dubbata.
Haa tahu malee Jawaar inni akkuma jirutti tahee Finfinneen magaalaa amala addaa qabdu fi qonnaan bulaa buqqisaa babal'ataa bultudha jedha.
''Hiriirrii fi gaaffiin ammaa kun kan ijaarsa manneetii qofa natti hin fakkatu, gaaffii abba biyyummaa Finfinnee kan inumaayyuu alagaan Finfinnee hin seentan jedhee mataa raasuu fi mootuymmaanis irra dibee darbaa jiru furuuf waan godhamu natti fakkata.''
Haalli kun yoo yeroodhaan hin furamne jijjirama siyaasaa amma biyya keessa jiru irratti dhiibbaa qabaachuu danda'aa gaaffii jedhu Jawaar uummanni ammas jijjiramicha deeggaraa jira jedhee uummannis tasgabbaa'ee karaa nagaa qabuun gaaffii isaa dhiyeessuu qaba jedhe.
Mootummaanis deebisee madaa isaa tuttuquu dhiisee gadi taa'ee tasgabbiidhaan uummata kana waliin mari'atee deebii itti kennuutu furmaata jedha Jawaar.
'Jiddu seentummaa qaama alaa hin simannu' jedhan MM Abiy Ahimad
Sabaan fo'amuu waldhibdee Itoophiyaa keessaa hammeessa jedhamee sodaatamu
Haleellaa Matakkaliin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 40 gahe
17 Sadaasa 2020
Guyyoota itti aanan tarkaanfii seera kabachiisuu isa xumuraatu fudhatama - MM Abiy
Manni Murtii dhimma Dr Huseen Kadir irratti qorannoof yeroo dabalataa kenne
Ministirri Muummee Kaanaadaa Jastiin Tiriidoo ‘piraank’ godhaman
Weellisaan Masrii lammiilee Israa’el waliin suuraa ka’e seeratti dhiyaachuuf
Siidaan sibiilaa hin beekamne gammoojjii keessatti argame gaaffii tahe
Oromiyaatti maatiin ijoolleef 'maaskii bitanii barnootni eegala'
Dabratsiyoon GabraMikaa'el loluu akka itti fufan kakatan
Maayikaadiraatti namoonni ajjeefaman 600 ol jedhe Komishiniin Mirga Namoomaa